Ahoana no hampiofana ny zanako kely tsy hanaikitra | Alika Manerantany
Monica Sanchez | | Training, Puppies
Raha misy zavatra ataon'ny alika kely matetika dia izany manaikitra. Mila mizaha ny zava-drehetra izy ireo, ary noho izany dia mampiasa ny vavany toa ny tanana izy ireo. Ity fihetsika ity, izay mety mampihomehy antsika amin'ny voalohany, dia tokony hatsahatra haingana araka izay azo atao, satria na dia tsy mandratra na miteraka fahasimbana be aza izy io, rahampitso dia hanana tanjaka bebe kokoa ary, noho izany, dia afaka mamaky maro hafa zavatra ary Mety handratra antsika tsy fanahy iniantsika akory.
Mba tsy hitrangan'izany dia hilaza aminao izahay ahoana no hampiofana ny zanako kely tsy hanaikitra.
1 Fanalahidy hianarin'ny alika kely tsy hanaikitra
2 Ahoana ny fomba hampianarana azy tsy hanaikitra
Fanalahidy hianarin'ny alika kely tsy hanaikitra
Mba hanabeazana puppy dia tokony ho izy marary, foana y orinasa amin'ny fanapahan-kevitray. Ho fanampin'izany, ny fianakaviana iray manontolo dia tsy maintsy miara-miasa mba hisorohana ny alika tsy hanaikitra, satria raha olona iray monja no manao izany dia ho very hevitra ilay alika ary, angamba, manohy manaikitra. Noho izany dia ilaina ny fanarahan'ny tsirairay ny andiana "fitsipika" ka, tsikelikely, takatr'ilay biby fa tsy manaikitra izy, na amin'ny fanaka na amin'ny olona.
Ahoana ny fomba hampianarana azy tsy hanaikitra
Ny fomba tena mamporisika azy hampianarana azy dia amin'ny alàlan'ny fampiofanana tsara, na amin'ny alàlan'ny fitsaboana alika, petting na kilalao. Na ahoana na ahoana dia tsy tokony hikapoka na hiantsoantso ianao, satria ny fanaovana an'io dia hatahotra ilay biby ary ho sarotra be ny mampianatra azy, satria mety hiafara amin'ny fahatahorana antsika izany.
Noho izany, amin'ny faharetana hatrany, raha hitantsika fa mikikitra hanaikitra antsika izy, ny azontsika atao dia:
Omeo kilalao izy, toy ny teeet, ary avelao izy hitsako azy. Manampy indrindra izany raha mitsako fanaka, fitafiana na zavatra hafa ianao.
Asehoy azy ny fitsaboana alika, mangataha, ohatra, "hipetraka" ary omeo azy.
Raha manaikitra alika hafa ny zavatra ataony, dia horaisinay eny an-tsandrintsika izy ary hapetratsika eo alohan'ilay alika hafa, mba hanitry ny fofony. Amin'izany fomba izany, ny alika kely dia hianatra hanaja alika hafa.
Miaraka amin'ireto torohevitra ireto dia hianatra hitondra tena ny volonao, ho hitanao 😉.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana no hampiofana ny zanako kely tsy hanaikitra
Affenpinscher, toetra mampiavaka ny karazany
Ben sy Duggie, finamanana miavaka